Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Marcos Rojo Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
LB na-egosi Full Story of a Defensive Genius kasị mara aha na aha njirimara; “Becho”. Anyị Marcos Rojo Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na Off-Pitch Marcos Rojo Facts.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike nchekwa ya mana ole na ole tụlere akụkọ ndụ Marcos Rojo nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Marcos Rojo Storymụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu -Ndụ mbido
[Full Aha] Faustino Marcos Alberto Rojo mụrụ na 20th nke March 1990 na La Plata, Argentina. Amuru ya Carlina Rojo nne ya na Marcos Rojo Snr nna ya. O tolitere na El Triunfo na La Plata, obodo dara ogbenye 40 kilomita si Buenos Aires (Isi Obodo Argentina). Ọ bụ obodo a maara maka ndị omempụ a ma ama na ndị bi na ya hụrụ bọọlụ n'anya.
N'ịchọ ime ka ọ malite ọrụ ya na mpaghara na-enweghị mpụ na La Plata, nne na nna Marcos kpọgara ya Estudiantes LP ebe ọ debara aha ya dị ka onye na-eto eto na-eto eto mgbe ọ dị obere 4. N'okpuru ebe a bụ ihe osise dị ịtụnanya onye na-agbachitere na-ewere nzọụkwụ mbụ ya na egwuregwu mara mma dịka nwatakịrị.
Dị ka Marcos Rojo si tinye ya,… “N’oge ahụ m malitere ịgba bọl, papa m enweghị ụgbọala. Ọ dara ogbenye ma ọzụzụ m adịghị nso n'ụlọ anyị. Ya mere, anyị ga-eji igwe. Nnyịn mbiba ikasan̄a ke enan̄ukwak ibịghi. Papa m na-ere ihe n'okporo ámá, ọ ga-abịaghachikwa ịkpọrọ m n'ụlọ maka njem ahụ. Ọ bụ nnọọ ogologo njem m ga-enwe ezigbo ọkụ mgbe ọ na-anya ịnyịnya ígwè ya! ”.
Rojo ga-aga ịzụ ọzụzụ, njem gbara gburugburu 20 kilomita site n'ụlọ ya gaa n'ala ọzụzụ ya. O mere ọtụtụ àjà iji ghọta nrọ ya nke ịghọ ọkachamara ọkachamara.
“Apụrụ m ịhụ agụụ ya,” ka Rojo Snr (nna ya) kwuru. “Enwere m ike ịhụ ya n'ime ya ma enwere m ike ịhụ onwe m n'ime ya n'ihi na ọ ga-agbaso bọọlụ niile. Ọ dị iche na ụmụ nwoke ndị ọzọ ọgbọ ya. ” Onye klọb (Estudiantes) onye nkuzi ntorobịa Gabriel San Millan matakwara ikike Marcos ma nyere aka zụlite talent ya na klọb ọkachamara mbụ ya. "Na nyocha, ọ bụ ezigbo onye ọkpụkpọ," kwuru San Millan.
Ọ gara n'ihu…Ọ nwere ezigbo nkà na ezigbo ntọala. Mana ihe na-apụtakarị n’ihe banyere ya bụ ọchịchọ ahụ ime ihe ka mma mgbe niile. Mgbanwe Marcos Alonso dị ka onye ọkpụkpọ dị ịtụnanya. Mgbe ọ gbara afọ 18 ma ọ bụ 19, ọ malitere itolite na anụ ahụ.
Ná ngwụsị nke afọ iri na ụma ya, Marcos na ndị obodo ya na-egwuri egwu, Estudiantes, bụ onye nọ na Division nke Mbụ nke Argentine. Afọ Marcos lụrụ ọgụ nke afọ iri na ụma wee kwụsị ụlọ akwụkwọ n'oge.
E nwere ọtụtụ ohi, na-alụ ọgụ na ọbụna ọnwụ. Football bụ onye nzọpụta ya. Ọ na-agba bọl mgbe ọ bụ nwata. Bọọlụ mgbe niile, ehihie na abalị. Ọtụtụ, ọtụtụ oge Marcos ga-alụ ọgụ. Ọ na-ewe oke iwe ma nwee ọtụtụ esemokwu. Ọ bụ ụkpụrụ n'okporo ámá ndị a. Ga-adị ike.
Mgbe Marcos meriri Copa Libertadores mgbe ọ dị afọ iri na ụma, Marcos kwagara Spartak Moscow, mgbe ahụkwa, Sporting Lisbon. O mere n'ezie akara ya na njedebe nke 2014 World Cup na Brazil ka Argentina na-aga n'ụzọ niile ruo na njedebe tupu ya efunahụ Germany. Nke a mere ka a kpọọ gị Nwoke United. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Marcos Rojo Storymụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Rojo lụrụ Eugenia Lusardo, bụ ụdị ejiji ejiji na Lisbon. Ndị enyi abụọ ahụ hụrụ ma hụrịta ibe ha n'anya mgbe Rojo nọ Sporting CP. Eugenia dị ka ọ na-arụ ọrụ n'oge ahụ na Lisbon nke na-akpọ ụlọ ahịa akpọrọ Dama de Copas. Ọ bụ n'ezie, nwanyị nke mara mma mara mma.
Di na nwunye a nwere nwa nwanyi a na-akpọ Morena (onye ha ji obi ebere na-akpọ 'More').
Ndụ Rojo na enyi nwanyị nwanyị mara mma bụ Eugenia Lusardo bụ ụwa nke na-esiteghị na Argentine na-azụlite siri ike na ogbenye barrio.
Ihe Mgbakwunye: Na Disemba 2014, Rojo nwere otu nwanyị ọ zutere na ụlọ ịgba egwu abalị. Ọ boro ya ebubo na ọ na-agba akwụkwọ ma wepụ iwu iji kwụsị akwụkwọ akụkọ na-ebipụta aha ya na akụkọ ahụ. E buliri iwu ahụ na aha ya n'April 2015 n'ihi nchegbu na enwere ike na-enyo ndị na-agba ụkwụ ndị ọzọ na nke a, mana ọ ka nọ ebe ahụ iji gbochie ịhapụ ihe oyiyi nke Rojo.
Marcos Rojo Storymụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu -Ndụ Ezinụlọ
Football zọpụtara Marcos na ndụ n'okporo ámá siri ike nke El Triunfo ma mee ka ezinụlọ ya pụọ ​​na ịda ogbenye. N'okpuru bụ foto nke Marcos na mama ya, Carlina onye bụ onye kachasị erite uru na akụ na ụba ya na ihe ịga nke ọma.
Marcos Rojo Snr, nke a na-akpọ 'Titi', bụbu onye ọkpụkpọ egwuregwu na El Cruce ma nyere aka mee ka nwa ya nwoke banye egwuregwu mgbe ọ dị obere. Nna ya mere naanị £ 2.50 kwa ụbọchị dị ka onye na-ere ahịa n'okporo ámá, nke ga-ezuru Marcos na ụmụnne ya anọ - Franco, na ụmụnne nwanyị atọ - Noelia, Micaela, na Sol. N'okpuru bụ foto nke Marcos na ụmụnne ya atọ n'oge ha bụ nwata.
Ọmarịcha Marcos Rojo na akụnụba ahapụla ezinụlọ ya na-atụ egwu na a ga-egbu ha. Ndị omekome na Argentina etielarịrị nna ya ihe ma tinye égbè n'isi nne ya. Otu onye otu òtù ọjọọ batara n'ụlọ nwata ya yiri egwu igbu nwanne ya nwanyị dị afọ itoolu bụ Sol na Godson, bụ otu afọ.
Ha na-atụ anya ka ha jide aka na ụfọdụ nde pound ndị ọ na-enyekarị ndị ọ hụrụ n'anya. Nke a bịara mgbe ọ na-eme ka ọha na eze na-ehichapụ ụgwọ ọrụ ya dị ukwuu. Nwanne nwanne Marcos Franco na nwanne Noelia jiri obi ike kwue banyere egwu ezinụlọ na ha nwere mmeri Marcos nwere ihe ịga nke ọma n'ọhịa
N'ajụjụ ọnụ ha na Sun, ha gwara ya ebe ọ bụ na ọ sonyeere Man Utd n'August, ezinụlọ ahụ akwụsịla ịzaghachi ọnụ ụzọ ha ma nwee nchebe. N'ikwu okwu site n'ụlọ ya na La Plata, Noelia kwuru, sị: "Anyị na-atụ egwu mgbe niile. Ha na-ele anyị anya n'ihi Marcos. Ha maara ụlọ, onye ọ bụla maara. Anyị aghaghị iji nlezianya na anyị
azaghachila onye ọ bụla ọnụ ụzọ. Anyị ga-etinye ihe nkwụsị na windo anyị nile - n'ihu, azụ na ibo ụzọ n'elu ụlọ. Ọ dị ize ndụ bụ ezinụlọ Marcos Rojo. Ma anyị agaghị ahapụ n'ihi na nke a bụ ụlọ anyị. " O wutere ya nke ukwuu na mwakpo ndị omempụ wakporo ụlọ nne ya na nna ya nke na o tinyere foto na akaụntụ Twitter ya na-egosi nsonaazụ nke ihe ike ahụ. Ka ọ dị ugbu a, Marcos iwe were rịọrọ ndị uwe ojii ka ha chọpụta ndị mere mpụ - ha
ọ dịghị mgbe ọ bụla - ma were Twitter iji katọọ ndị na-awakpo ya.
Ọbụna mgbe ndị ezinụlọ ya si n'ụlọ ha kwapụ, ha ka nọ na-abụ ndị ọzọ
ugbua ohuru iji weputa ego n'aka ha. Ọ dị mkpa iburu n'uche na mgbe Marcos sonyeere United na oge okpomọkụ, a kwadoro nkwekọrịta ahụ n'ihi nsogbu ndị ọrụ-ebubo kpatara ebubo nke mbuso agha n'obodo ya.
Marcos Rojo Storymụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu - Ijikwa ọnọdụ na-adịghị mma
Franco nwanne ya kwuru, sị: “Ọ na-achọ mgbe niile ịbụ Veron ma na-eme ka ọ bụ ya mgbe ị na-egwu bọl n'ime ụlọ. Marcos na-anọdụkarị n'obere ọnụ ụlọ nke ya kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na otu ndị meriri ya na egwuregwu dị mkpa. Mgbe Argentina meriri Germany na 2014 World Cup Final, Marcos agaghị ekwu okwu ma ọ bụ hụ onye ọ bụla ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu izu. O nwere ike iwe iwe ọtụtụ ụbọchị. Ọ na-ewe iwe. N'oge a, ọ dị mkpa ka a hapụrụ ya naanị ya wee laghachi na jụụ. Mgbe iko ụwa gachara, o were ya ihe dị ka ụbọchị ise. Ọ na-agbanyụ ekwentị ya, ọ naghịkwa agwa onye ọ bụla okwu. Ma ọ dịbeghị na Manchester United, ma. "
Marcos Rojo Storymụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu - Arụmụka ahụ
Marcos kpatara otu esemokwu mgbe o dechara foto nke onye nwe ọgwụ Pablo Escobar na ibe Instagram ya n'okwu a: “Naanị ndị mụ na ha agụụ so ma kwụ m n’akụkụ mgbe ihe siiri m ike n’oge ahụ, ga-eri nri na tebụl m.”
Marcos, mgbe a na-emegide ya, kwuru na post ahụ abụghị nnukwu ihe ma kwuo, sị: Ihe m sere ebe a bụ na okwu na okwu ndị na-amasị m na-atọ m ụtọ. ” Peharbs, ha hụrụ akụkọ ndụ Escobar na TV ma nwee mmasị na mkpirịta ụka ahụ. Ọ pụtaghị. N'ezie, ọ na-akwado ihe o mere. Otú ọ dị, n'agbanyeghị ọganihu ya, Marcos echefughị ​​mgbọrọgwụ ya ma jide n'aka na ezinụlọ ya nile ritere uru na ihe ịga nke ọma ya.
Nke a agaraghị eme ma ọ bụrụ na ọ gbasoro mmasị ọzọ ya na ndụ 'ukwe'. Marcos chọrọ ịbụ onye ọbụ abụ ma ọ bụrụ na ọ nweghị ike ịbụ ndị egwuregwu bọọlụ. N’ezie, Ọ na-abụ abụ ma na-agba egwu na nnọkọ niile, mmemme niile nke ezinụlọ.
Marcos Rojo Storymụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu -Ndụ nke Onye
Marcos Rojo nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Marcos Rojo: O nwere ọmịiko, nkà, na-ejighị nghọta, dị nwayọọ, maara ihe ma dị egwu (talent mbụ ya tupu football).
Adịghị Ike Marcos Rojo: Enweghị ike iji jikwaa ụgwọ.
Ihe Marcos Rojo nwere mmasị: Ịnọ naanị, ụra, egwu, mmekọrịta ịhụnanya, mgbasa ozi na igwu mmiri.
Ihe Marcos Rojo achọghị: Mediocres, nke a na-akatọ ya, oge gara aga na-alọghachi na-ezute ya na obi ọjọọ nke ụdị ọ bụla.
Marcos dị ezigbo enyi, ya mere, ha na-ahụkarị ụlọ ọrụ dị iche iche. Ọ na-adịghị achọ ọdịmma onwe ya ma na-adị njikere mgbe nile inyere ndị ọzọ aka, n'atụghị anya inweta ihe ọ bụla.
Marcos Rojo Storymụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu -Na-eri Banana
Marcos Rojo nyere otu n'ime isi okwu okwu nke otu n'ime Njikọ Njikọ nke Manchester United na Rostov - site n'iri banana na pitch!
Ọ bụ Jose Mourinho'Onye nke gara n'ihu na nkeji iri na ise nke asọmpi 2-1 na mkpokọta nchịkọta ekele Juan Mata Nkeji ọkara okirikiri. A hapụrụ akụkụ abụọ nke ndị Fans mgbe Ashley Young hụrụ ka ha na-enye Rojo banana bekee ka ọ rie mgbe ọ na-egwu egwuregwu.
Jose Mourinho kwetara na ọhụụ a na-ahụkebe sitere na ike ọgwụgwụ, ihe nwere ike ịrụ ọrụ na-abawanye n'etiti ugbu a na njedebe nke oge ahụ.
Mourinho gwara biotek Sport: “Ike gwụrụ Marcos ọtụtụ ugboro. Ọ maara na ahụ ya chọrọ ihe. Ọ rịọrọ naanị banana. Ọnọdụ banana ahụ adịghị atọ ọchị ma ọlị, anyị ga-asọpụrụ ọnọdụ onye ọkpụkpọ. ”
Marcos Rojo Storymụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu -egbugbu
Rojo nwere ike ikwu Bekee ugbu a, dịka akwara ụkwụ ya, nke gụrụ 'Nganga' na 'Ebube'.
Ọ nwere ọtụtụ nchịkọta ndị ọzọ, kwa:
Marcos Rojo Storymụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu -Rabona Clearance
ma ikpe site na nke a 'Rabona'Nwepu aka na iko ụwa enweghị ntụkwasị obi dị ukwuu na ụkwụ aka nri ya. Mark Lawrenson ji aka na-atụ aro “ọ gaara ele anya n’ịnyịnya ibu” ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Marcos Rojo Ụmụaka akụkọ na eziokwu ndị dị oke egwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.